ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ဂရမ်မီဆုအပါအဝင် တခြားဆုပေါင်း မြောက်များစွာကို ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော် Mariah Carey ဟာ သူမရဲ့ အမြွှာပူး သားနဲ့သမီးတို့ နှစ်ယောက်အနားမှာ iPad တွေ ဘာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ မထားရဲတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ တခြားကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမြွှာပူးပေမယ့် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးမို့ Roc နဲ့ Roe လို့ ချစ်စနိုးခေါ်နေကြတဲ့ သူမရဲ့ ရ နှစ်အရွယ် ရင်သွေးနှစ်ယောက်ထဲက သားကလေး Roc ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က iPad ကိုသုံးပြီး Online Shopping တစ်ခုကို လုပ်ခဲ့လို့ပါပဲတဲ့။
“ကျွန်မသားကတော့ နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် လက်ဖျားခါရတဲ့ အဆင့်ပဲရှင့်။ ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ… ကျွန်မကတော့ သူတို့ အခုလို iPad တွေဘာတွေသုံးနေတာကို နည်းနည်းတော့ ထိန်းချုပ်ထားရတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ Roc ဟာ ဟိုတစ်ရက်တုန်းက အဲဒီ iPad ကိုသုံးပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဟုတ်တိပတ်တိနဲ့ စျေးလျှောက်ဝယ်နေလို့ရှင့်။ ဟုတ်တယ်… သူဝယ်တာက နာမည်ကျော် Amazon ဆိုက်ကပဲ။ ၀ယ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း ကြည့်ဦး။ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀တဲ့” Mariah Carey ဟာ သူ့သားကလေးရဲ့ လုပ်ပေါက်ကို အံ့သြရယ်ချင်စွာနဲ့ ပြောပြခဲ့တာပါ။
Wearing our glasses at the Minion Mayhem! ?❤️?? #universalstudios
“အဲကိစ္စဟာ သူ့အဖေ Nick ဆီမှာ သူသွားအိပ်တဲ့ ညကပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်မှာ။ သြော်… ဒါနဲ့ သူမှာတဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀တန် ပစ္စည်းက ဘာလဲဆိုတာကို ပြောပြရဦးမယ်။ ခွေးတစ်ကောင်တဲ့ရှင့်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဟိုဘက်က သူ့ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ‘လူကြီးမင်းမှာထားတဲ့ ခွေးကိုပို့ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ’ လို့ ပြောတယ်နဲ့တူတယ်။ Roc ကလည်း အဲဒီအခါကျမှ ‘ကျွန်တော် ဘယ်ခွေးအစုတ်ပလုတ်ကိုမှ မမှာထားပါဘူးဗျာ’ လို့ ရုပ်တည်ကလေးနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်ပုံရတယ်”
တကယ်တော့ Mariah Carey ဟာ အမြွှာကလေးနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ အဖေဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် Nick Cannon နဲ့ ၂၀၀၈ တုန်းက လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၆ ကတည်းက နှစ်ဦးသဘောတူု ပြန်ကွာရှင်းထားကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ကလေးတွေနဲ့ တစ်လှည့်စီ အတူနေကြသလို အချင်းချင်းကြားမှာလည်း သိပ်ပြီးအေးစက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေ မရှိကြပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ မွေးနေ့ဘာညာစတဲ့ အထိမ်းအမှတ် နေ့လေးတွေဆိုရင် မိစုံဘစုံရှိရအောင် နှစ်ယောက်အတူ ကျင်းပပေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုကိစ္စကိုလည်း ကလေးက သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဆီမှာ သွားအိပ်ရင်း ထင်ရာလျှောက်လုပ်ခဲ့ပုံရပေမယ့် Mariah Carey ကတော့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံ ပေါက်မနေခဲ့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက Jimmy Kimmel Live အစီအစဉ်မှာ အင်တာဗျူးတစ်ခုကို ဖြေဆိုရင်း အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ချစ်စနိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးနဲ့သာ ပြန်ပြောပြခဲ့တာပါ။
“ကျွန်မတို့မှာ ခွေးတွေရှိပြီးသားပါ။ အဲဒါကြောင့် Amazon ကနေ သားလေးလျှောက်ဆော့သလို မှာထားတဲ့ခွေးကို cancel လုပ်လိုက်ရတာပေ့ါရှင်။ ဟုတ်တယ်… ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ခွေးတွေရှိပြီးသား။ တခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်း ရှိပြီးသား။ အလှမွေးငါးတွေ ဘာတွေလည်း ရှိသေးတယ်” အဲဒီနောက်မှာ Mariah Carey ဟာ သူ့ကလေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုသာ ပီတိဖြစ်နေဟန်နဲ့ ဆက်ပြောပါတယ်။ သားလေး Roc နဲ့ သမီးလေး Roe တို့က ရ နှစ်အရွယ်လေးတွေသာ ရှိကြသေးပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ ခြေရာကို တစ်ထပ်တည်း နင်းမယ့်ပုံစံလေးတွေ ပေါက်လာကြပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။
“အောင်မယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က သူတို့သီချင်းကို သူတို့ဘာသာလုပ်ပြီး အသံသွင်းထားတာတောင် ရှိတယ်ရှင့်။ ဘယ်သူမှ နားမထောင်ဖူးသေးလို့။ သူတို့တွေမှာ တကယ်ပါရမီရှိပုံရတယ်။ ကလေးလေးတွေပေမယ့် တကယ့် အထာလေးတွေနဲ့ပါပဲ။ တစ်ခါတလေဆို သူတို့ပုံစံက ကျွန်မတို့လို ဂီတအနုပညာသည်ပုံ ပေါက်နေတော့တာရှင့်”
Mariah Carey ဟာ Nick နဲ့ အိမ်ထောင်မပြုခင်က ပထမအိမ်ထောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ သူမ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ပထမအမျိုးသားကတော့ SONY တေးထုတ်လုပ်ရေးက အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Tommy Mottola ဆိုတဲ့လူပါ။ အဲဒီနောက် ကြာကြာမမြဲဘဲ ၁၉၉၈ မှာ Tommy နဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့တာပါ။ သားသမီးလည်း မရခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ Nick နဲ့ကျမှ ဒီအမြွှာကလေးနှစ်ယောက်ကို ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Mariah Carey ဟာ အချစ်ရေးရာကိစ္စတွေမှာ ဆက်ထုံးနည်းနည်းများသလို ရှိပါတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်အမေဖြစ်တဲ့ သူမဟာ Nick နဲ့ကွဲပြီးတဲ့ ခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာလည်း လူသစ်တွေနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းအသစ်လေးတွေကို ဆက်လက်ဖန်တီးနေခဲ့လေတာမို့ပါပဲ။ ။
PREVIOUS POST Previous post: သားအဖနှစ်ယောက်ကြား နီးကပ်တဲ့သံယောဇဉ်ရှိကြောင်းကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ပြောတဲ့ Eminem သမီး Hailie Scott
NEXT POST Next post: စေ့စပ်လိုက်တဲ့ Ariana Garande နဲ့ Pete Davidson